Usuku My Pet » 5 Izinto Ongafunda Ngayo Dating From 50 Shades of Grey
5 Izinto Ongafunda Ngayo Dating From 50 Shades of Grey
Ever wezwa Fifty Shades of Grey? Nakuba zonke hype ihlobene human isifiso sobulili izindlela eyingqayizivele naughty ukufeza it, ngempela ukhona asho okujule. Ingabe lokho kungenzeka? Empeleni, yebo. Le ncwadi liveza isifiso, ukukhangana, nothando lwezithandani nge psychology womuntu. Empeleni, kungaba empeleni ingasetshenziswa njengendlela bible dating. Umxhwele? Qhubeka ukufunda ukuthola izindlela ezahlukene Fifty Shades of Grey kungaba ukukufundisa dating nobudlelwano.
Isifundo #1: Attention Single Enhle
Christian, uhlamvu male main, Ufuna Anastasia, kweqhawekazi. Wenza ngenhloso yakhe ecacile ngokweqile. Yakhe amandla ukunakwa ngokocansi akusho ukudamba lapho nabanye abesifazane langa ukungena picture. Focus Yakhe eyinhloko phezu Anastasia and Anastasia kuphela.
Le ukunakwa kuba oludakayo kakhulu abesifazane abaningi ikakhulukazi namuhla njengoba umphakathi uthi kulungile ukuba amadoda ukunikeza nesithakazelo ezingacacile ukuze owesifazane. Ukunikeza usuku lwakho azinake ususe izithikamezo futhi enikeza contact full iso kuzosiza ukuba sijulise uxhumano lwakho kanye ibonisa ukuthi ngempela mzuzu.
Isifundo #2: Beqhutshwa and Intentionality
Always in wazibamba, Christian enquma bazinike isikhathi nomzamo lokuthola ezahlukene namakhono. Wabuye njalo ubheka izindlela inselele ngcono wazibonakalisa engumuntu, like nje Anastasia akwenzayo lapho yena ephelelisa interview wakhe kanye Christian kungakhathaliseki ukuthi kuyinselele kwaba.
Nakuba kungase kubonakale kungenakwenzeka, kukhona amadoda nabesifazane laphaya abaphumelelayo, ezihlakaniphile, nangokomzimba futhi kufanelekile ngokomzwelo. By ukuphila okunenjongo ngokusebenzisa ukukhula nsuku zonke kanye nezinselelo, ungaba self yakho umhlabeleli okuyoholela ngenhloso edonsa a umlingani efanayo.
Isifundo #3: Ukuzimisela ukuba abasengozini
Ukuphila kugcwele ukuhlukunyezwa nokwethuka okwasiza Christian ukuthatha konke ezandleni zakhe siqu bese sigxila angaphumeleli. Nakuba yena kuvela avalwe off ekuqaleni, Womlingiswa umKristu ezithandekayo njengoba kancane lets Anastasia singene ezweni lakhe ngokomzwelo futhi lets wakhe amphulukise.
Anastasia, ngenkathi bagcwala ukuba msulwa nokuzenyeza, enquma ukuthi eqinisweni uyafuna Christian. Futhi ngenkathi umhlaba kwakhe ayikaziwa ngokuphelele futhi new kuye, yena Luhlanganisa kuye yokuphila kwakhe.
Ngenxa emphakathini kanye umqondo wokuthi ukubonisa imizwa kusho ubuthakathaka, it is engamukeleki ukubabonisa. Kodwa empeleni, eveza imizwa empeleni ingenye yezinto eziqine ukwenza. Futhi Ngokuvumela omunye umuntu ngempela unendaba nokuthi trust ukubona lezi imizwelo ivumela inhlonipho kanye ubuhlobo sijulise.
Isifundo #4: Izinkulumo ezinqumayo
Christian uyazi ukuthi ungubani nokuthi yini ayifunayo empilweni ngokuphila ngokuvumelana nezindinganiso eziphakeme futhi ngoba uyazi ngempela ngokwakhe. Lapho unquma ukuthi ufuna Anastasia, empeleni kusho okuthile.
Ukwenza izinqumo eqinile, ngokuba inkanuko futhi abalubonisayo, eziholela izinsuku zakho ngaphezu eyakhayo ngokukhulumela umlingani wakho kusiza ukugxilisa izinhloso eqinile. Kuyinto njalo nice ukwazi ukuthi kuphela wena wayefuna futhi wayefisa.
Isifundo #5: Uthando, Uthando, futhi Desire Unapologetic Sexual
Ukubikezelwa kuba ukufa inkanuko. Uma umKristu is hhayi ukuyishaya, ukubhaxabulwa, noma ukubopha Anastasia up, yena ubambe, ukupotoza, futhi kissing wakhe. Christian unamandla, soft, nolaka, futhi sweet zonke ngesikhathi unapologetically abafisa Anastasia. Futhi turn, Anastasia ufunda ukuthanda futhi Unganxaneli ukunakekela kwakhe kanye nesidingo zingalawuleki for wakhe.
Ngokocansi ukuhlola futhi saqala kuzosiza ube nobuhlobo. Loving, complimenting, futhi abafuna ukwenza umlingani wakho imibukiso happy nje ukuthi umkhathalela kangakanani. Isihluthulelo iwukubonisa ukuthi wena nomngane okahle ngoba ufuna ukuba.
Lezi Izifundo kusukela Fifty Shades of Grey kuyokusiza ukuba ukuheha umlingani iphupho noma ukujulisa ubuhlobo bakho ziyachuma kakade.
Kungani Tall Girls Ukuphola Guys edlulisa imiyalezo
6 Imibuzo Imibhangqwana Okufanele Cabanga Ngaphambi Ukuthola A Pet
Five Online Dating Profile Amaphutha To Gwema
Indlela Kiss Via Zodiac Sign